Isbaanishku waxay ku kharash gareeyeen $ 113.9 bilyan safarka gudaha 2019
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Isbaanishku waxay ku kharash gareeyeen $ 113.9 bilyan safarka gudaha 2019
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Caribbean • saaciday inay • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Saddexda meelood ee ugu sarreeya ee dalxiisayaasha reer Hispanic ee habeen -guuradu yihiin California (21%), Texas (15%) iyo Florida (14%). Tani waxay la xiriirtaa saddexda gobol ee leh tirada ugu badan ee dadka deggan Isbaanishka.
Inta badan socotada Isbaanishka (85%) ayaa booqday dalka/dhulka dhaxalka qoyskooda, iyadoo 15% ay soo laabtaan in ka badan hal mar sanadkii halka 22% ay soo noqdaan sanad walba.
Boqolkiiba XNUMX ayaa isku raacay inay u badan tahay inay soo booqdaan goob ay ka socdaan dhaqammada Isbaanishka oo u dabaaldegaan ganacsiga Hispanic iyo waxqabadyada dhaqanka.
Saddexda meelood ee ugu sarreeya ee dalxiisayaasha reer Hispanic ee habeen -guuradu yihiin California (21%), Texas (15%) iyo Florida (14%).
Daraasad cusub oo tilmaamaysa baahiyaha, welwelka iyo dabeecadaha socdaalka Isbaanishka ee Maraykanka ayaa maanta la sii daayay.
Warbixinta “Vistas Latinas: Daraasad Taariikhi ah oo ku saabsan Socotada Mareykanka ee Isirka Hispanic”, oo magaceedu yahay Laatiin Aragtiyada, waa cilmi -baaristii ugu horreysay ee socdaal ee nooceeda ah si loo baaro dabeecadaha, fikradaha iyo dareenka dadka socotada ah ee ka socda kooxda dadka ugu dhaqsaha badan ee Mareykanka.
Vistas Latinas ayaa sidoo kale ah daraasaddii ugu horreysay ee lagu qiimeeyo awoodda kharashaadka socdaalayaasha Hispanic -ka Mareykanka, iyagoo ogaaday inay ku bixiyeen $ 113.9 bilyan safarka firaaqada gudaha ee 2019 waxayna ku xisaabtameen 13% dhammaan safarrada firaaqada ee sannadkaas.
Socotada Isbaanishka & Matalaadda
Dadka Hispanik -ka ah ee Ameerika waa dheri dhalaalaya dhaqammada hodanka ah, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la xuso in khubarada safarka ay adeegsadeen hab cusub oo ay ku soo bandhigaan sahanka si ay u tusaan qaybinta dadka Latino ee United States, iyo sidaas oo kale waxay bixiyaan aragtiyo waxqabad leh oo ku saleysan halka ay socotada Isbaanishku ku nool yihiin iyo halka ay safartoodu ku qaadan karto.
Kuwii la daraaseeyay Vistas Latinas - badankoodu waxay sheegeen inay ku dhasheen United States (83%) iyo aqlabiyaddu waxay tilmaameen in waalidkood ay sidoo kale ku dhasheen Mareykanka Badh jawaabeyaashu waxay tilmaameen in qoyskoodu asal ahaan ka soo jeedo Mexico, halka rubuc ka mid ah jawaabeyaasha la wareystay ay sheegeen inay ka mid yihiin Caribbean dhaxalka (Puerto Rican, Dominican ama Cuba).
Natiijooyinka muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Inta ugu badan - 80% dadka safarka ah ee Isbaanishka ah - waxay doorbidaan in loo aqoonsado Hispanic, halka 25% ay doorbidaan Latino/Latina iyo 3% waxay door bidaan ereyga Latinx (jawaabeyaashu waxay dooran karaan in ka badan hal erey oo la doorbido).
Boqolkiiba XNUMX dadka la wareystay waxay sheegeen inay aad ugu dhowdahay inay booqdaan goob loo socdo haddii ay ku arkaan wakiilnimada Isbaanishka agabyada xayeysiiska iyo/ama suuqgeynta.
Socotada Isbaanishku waxay inta badan cunaan dhammaan noocyada warbaahinta Ingiriiska.